दिउसो बालुवाटार पुगेका गौतमले साझमा बोलि फेरे ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारदिउसो बालुवाटार पुगेका गौतमले साझमा बोलि फेरे !
दिउसो बालुवाटार पुगेका गौतमले साझमा बोलि फेरे !
काठमाडौं- नेकपा–एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली गलत रहेको र उनीसामु आफूले आ’त्मस’मर्पण नगरेको बताएका छन्। आज शनिबार अध्यक्ष ओलीले बोलाएको पार्टी संसदीय दलमा सहभागी भएका गौतमको आजै राति सो धारणा सार्वजनिक भएको हो।